« prev 1 … 66 67 68 69 70 … 927 next »
Ciidamo Ajaanib ah oo weerar ka fuliyay Shabeelaha Hoose.
Wararka laga helayo Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in mareykanka ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Hantiwadaag oo ku yaala Gobalkaasi.
Iska hor imaad Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray Marka
Iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Mareykanka oo duqeyntii afaraad todobaad gudahood ka fuliyay Soomaaliya
Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in Talaadadii la soo dhaafay uu duqeyn ka fuliyay deegaan ka tirsan Gobolka Baay, kaasoo lagu dilay illaa lix dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.
Baasaboorka Soomaaliga oo ka awood badan Baasaboorada Afghanistan iyo Ciraaq
Baasaboorka Soomaaliga ayaa markale xajistey booskii uu ugaga jirey qiimeynta baasaboorada caalamka, iyadoo warbixin la soo saaray ay ka hooseeyaan wadamada Afghanistan iyo Ciraaq.
Madaxweynihii Bankiga Aduunka oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu is casilayo
Sagal Radio Services • News Report • January 8, 2019
Madaxweynaha Bangiga Adduunka Jim Yong Kim ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu xilkaasi iska casilayo kadib markii uu jagadaasi hayay muddo lix sanadood ah.
Saciid Cabdullaahi Deni oo loo doortay madaxweynaha cusub ee Puntland
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland,Cabdikariin Maxamed Axmed (Dhoobo-dareed) ayaa goor dhow shaaciyay natiijada doorashada madaxweynaha Puntland oo la isla soo gaaray wareegii saddexaad.
Producer • Sagal Radio Services • Audio • January 7, 2019